Mihainoa amin'ny alàlan'ny rindrina, Manipulator teleskopika, Palitao fanariana baomba - Heweiyongtai
Fikarohana porofo ara-batana an-kalamanjana indrindra ...
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. dia orinasa ha-teknolojia manokana amin'ny famokarana sy fivarotana fitaovam-piarovana, vokatra EOD, vokatra famonjena.，Fanadihadiana heloka bevava, sns.
Ny vinanay dia ny hanome ny vokatra farany sy ny haitao amin'ny vidiny mirary indrindra ho an'ny mpanjifantsika, ny tena zava-dehibe dia ny kalitao avo lenta. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra sy ny fitaovantsika dia ampiharina amin'ny birao fiarovana ny besinimaro, fitsarana, miaramila, fanao, governemanta, seranam-piaramanidina, seranan-tsambo.
Rafitra fitiliana taratra X-portable
Rafitra famotopotorana fahitana amin'ny alina ambany hazavana
Namerina santionany avy amin'ny ...
Hatramin'ny 1976, ny santionan'ny vatolampy volana voalohany niverina teto an-tany dia nidina. Ny 16 desambra lasa teo, nitondra sambon-danitra tokony ho 2 kilaometatra ny sambon-danitra Chang'e-5 an'i Sina ...
Heweiyongtai dia miseho ao amin'ny EUROSATORY 11-15 jona 2018, ny Eurosatory biennial dia nanana ny fanokafana marika tao amin'ny Centre Nord Villepinte Exhibition Center. Inte ...
Heweiyongtai & "Salon de l'industrie de police" dia nitondra dingana vaovao tao ...
Nanomboka ny 8 ka hatramin'ny 10 Mey 2018 (3 andro ny fitambarany), ny SOFEX faha-12 (fampirantiana sy ny fihaonamben'ny tafika manokana) Jordania dia natao tao amin'ny ivon-toeran'ny fampiratiana Amman miaraka amin'ny ...
Raikitra UAV Jammer
Omeo anay ny mailakao dia havaozina isan'andro miaraka amin'ireo hetsika farany indrindra ianao, amin'ny antsipiriany!
Fakan-tsary fakan-tsary, Masinina scanner X-Ray azo entina, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Scanner X-Ray Portable, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Fitaratra fitiliana fiara,